कतारमा राम्रो तलबमा सुरक्षा गार्डको जागिर ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कतारमा राम्रो तलबमा सुरक्षा गार्डको जागिर !
कतारमा सेक्युरिटी गार्डका लागि नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकट। अल सेमात सर्भिस ग्रुप नामको कम्पनी छ । सुरक्षा गार्ड भनेको पद हो। उल्लेखित पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कम्पनीले प्रभावकारी तलब उपलब्ध गराइनेछ। यहाँ धेरै नेपाली कामदारहरू छन् जो धेरै वर्ष/समयदेखि काम गरिरहेका छन् साथै अन्य देशका कामदारहरू छन्। आफ्ना कर्मचारीहरूलाई राम्रो सुविधा र गाइडहरू प्रदान गर्ने कम्पनीको प्रतिष्ठाको कारण, तिनीहरू सबै यहाँ काम गर्न पाउँदा खुसी छन्।
जब पनि कर्मचारी समस्या वा अवरोधहरू छन्, यो कम्पनीले तिनीहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दछ। कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई टोलीको रूपमा सँगै काम गर्न प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्छ। ओभरटाइम काम यस स्थितिमा उपलब्ध छ र यो कम्पनीको नीति र निर्णयहरू अनुसार प्रदान गरिनेछ। यो स्थिति एक दिन 8 घण्टा काम गर्दछ। हप्ताको6दिन पदमा समर्पित छन्।
कम्पनीको नियमावली अनुसार वार्षिक बिदा दिइन्छ । कामदारहरूले आवास, खाना, वा खानाको लागि कुनै लागत खर्च गर्नुपर्दैन किनभने कम्पनीले ती उपलब्ध गराउनेछ। यी पदहरू अधिकतम दुई वर्षको लागि मात्र उपलब्ध छन्। कसरी आवेदन दिने भन्ने विवरण जनशक्तिलाई कसरी सम्पर्क गर्ने अन्तर्गत पाउन सकिन्छ। LT नम्बर प्रमाणित गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा परामर्श लिनुहोस्।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस्। तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ।
विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
आवेदन गर्नु अघि, सबै LT विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्।